Boeing 737 Classic Multi Livery Pack FSX & P3D sano 2 5 bilood ka hor #903
Waan soo degsaday oo aan ku rakibay Boeing 737 Xirmooyin Xirmooyin ah P3d, laakiin markaan bilaabay P3D v4 Ma heli karo Boeing 737. Ma u baahanahay Barnaamij dheeri ah si aan u bilaabo xirmada Boeing-ka?
Ka dib markii lagu rakibo TDS Boeing 737-700 Diyaaradaha Mareykanka FSX & P3D Xirmooyin ayaa jira isla dhibaatadii, ma lihi diyaarad Boeing ah.
Boeing 737 Classic Multi Livery Pack FSX & P3D sano 2 5 bilood ka hor #905
Dhibaatada ayaa go’an.
Boeing 737 Classic Multi Livery Pack FSX & P3D sano 2 4 bilood ka hor #928
Salaan, miyaad u ogolaatay Rikooo inuu sameeyo soo deg deg ah? Rakiiyaha si otomaatig ah ayuu u ogaa P3D V4? Diyaarsanaanta feylku wuxuu ku kaydsan yahay galka dukumiintiyada, (diyaarso 3Dv4 Add-ons) Waad koobi kartaa galka diyaaradda oo waxaad ku dhejin kartaa faylalka Barnaamijka / Lockheed Martin / Diyaar garowga 3D v4 / Sim waxyaabaha / Diyaaradaha Diyaaradda oo ku dheji halkaas